Akeneme uMasilela ngokuthi uzoba yisibukeli kowePSL | News24
Akeneme uMasilela ngokuthi uzoba yisibukeli kowePSL
Johannesburg - Umdlali wasemuva weKaizer Chiefs, uTsepo Masilela, uthi ukunqoba isicoco seligi kuyinto enkulu kunazo zonke.
UMasilela udlale indima enkulu ekutheni Amakhosi anqobe eseligi kule sizini, uqale imidlalo engu-28, kanti futhi wabanesandla emagolini amathathu kwashaywa yiqembu lakhe koweMTN8.
Lo mdlali kodwa uzobe eyisibukeli emcimbini wePSL wokuklonyeliswa kwabadlali ngeSonto eSandton.
Funda nalolu daba: UBatxer uthi babenika nabanye ithuba
Ozakwabo, uTefu Mashamaite, Mulomowandau Mathoho, Willard Katsande, George Maluleka noMandla Masango bona basethubeni lokuthola imikomelo, kanjalo nomqeqeshi uStuart Baxter.
“Ukunqoba izicoco kuyinto enkulu,” kusho uMasilela kwi-website yeqembu lakhe. “Isicoco seligi sinqotshwa ngokubambisana. Sisinqobe ngokubambisana nathi.”
“Uma ngikhuluma iqiniso nje, bengingakulindele vele ukuba igama lami liphakanyiselwe kweyePSL. Ngakho angidumele kakhulu. Ngokwami, akukho okudlula ukunqoba eseligi.”